Adeegyada ay tahay Dowladda Hoose ee Xamar inay u qabato dadka – Kalfadhi
Muwaaddinka wuxuu dowladda hoose xaq ugu leeyahay waxqabad beddel u noqdo canshuurta uu bixiyo. Labada dhinac waxaa saaran waajib is-taageerid ah si ay u wada guuleystaan. Soomaaliya oo ah dal ka soo kabanaya burbur dowladeed iyo dagaallo qaatay in ka badna labaatan sano ma aha in dowladda loola xisaabtamo sidii inay maamusho dal hagaagsan, laakiin waxaa jiri kara adeegyo ay awooddo, ayse ka gaabisay.
Dowladda hoose ee degmo, magaalo ama caasimad waa maamulka hoose ee deegaankaas. Nidaamku waa inuu doorasho ku yimaado, hase yeeshee inta badan degmooyinka Soomaaliya taasi weli suuragal kama noqon. Waa maamul si toos ah ula shaqeeya dowladda dhexe.
Sida caadiga ah, dowladda hoose waxay ka kooban tahay; Golaha Deegaanka, saraakiil, xisaabiye, xoghaye iyo guddoomiyaha oo loo yaqaano ‘Duqa magaalada’.
Dowladda hoose waa inay shacabka ka caawiso dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, biyaha, nadaafadda guud iyo bilicda magaalada, arrimaha samafalka iyo xuquuqda aadanaha iyo ciyaaraha oo ka qeyb qaata isdhexgalka bulshada.
Saciid Cabdalla Faarax oo bartay maamulka iyo dowlad- wanaagga ayaa sheegay in aan la simi karin shacab nidaam iyo kala dambeyn haysta oo ku qanacsan adeegyada ay bixiso dowladdooda hoose iyo shacab ka soo baxaya dagaal sokeeye. Hase yeeshee wuxuu muhiim u arkaa in ay dadku fahmaan nidaamka dowladnimada, waxa ay uga baahan yihiin iyo xaqa iyaga lagu leeyahay.
Wuxuu xusay in dadweynaha iyo dowladda hooseba ay saaran yihiin waajibaad ay tahay dhinac kastaba inuu ka soo baxo, waase marka la helo shacab raba una bisil dowladnimada, taas oo horseeedi karta in la helo dowlad waxqabata.
Natiijada dowlad-la’aantii muddada dheer lagu soo jiray iyo dagaallada waxaan ka xusi karnaa; jiilka hadda jooga ee aan soo gaarin dowladdii dhexe in aanay fahamsaneyn dowlad waxa ay tahay, qaarkoodna waxay aaminsan yihiin inay qeyb ka tahay caqabadaha nolosha ee jira.
Xilligan iyo dowladda hoose ee Xamar
Marka aan ka hadalno adeegyada gobolka Banaadir laga qabtay waxaa laga xusi karaa dhismaha waddooyinka qaar ee isku socodka muhiimka u ah sida waddada Maka Al-Mukarrama, Wadnaha, Fiya Moosko, Dan-wadaagaha. Waxay dhismahooda la kaashatay ganacsato iyo dowladda Turkiga.
Soo celinta kaabayaasha nolosha ee bulsho la kufaa-kaceysa saboolnimo iyo dhibaatooyin badan oo colaadaha ka dhashay, waxaa lagama maarkamaan u ah in wacyigelin loo sameeyo si ay u fahmaan faa’iidooyinka dowladda ay ka heli karaan. Sida uu aaminsan tahay Saciid waxaa taas loo mari karaa in la tuso canshuurta ay bixiyaan sida ay wax uga tareyso adeegyada guud ee ay u baahan yihiin.
Howlaha kale ee la xusi karo ee dowladda hoose ee Xamar waxaa ka mid ah amaanka guud ee caasimada iyo hannaanka deriseynta oo qeyb weyn ka qaadata amniga iyo xasilloonida.
Saciid ayaa intaas ku daray in waddooyinka burbursan, biyaha iyo korontada qaaliga ah ee Muqdisho ay dhibaato ku yihiin shacabka, laakiin aan waxba laga qaban kari doonin haddii aan la helin dad u diyaar ah inay bixiyaan canshuurta ku waajibtay iyo dowlad si caddaalad ah u maamusha dhaqaalahaas, dibna ugu adeegsata wax u qabasho bulsho.